Kismaayo News » Kenya oo qarka u saaran inuu ka dhaco dagaal sokeeye
Kenya oo qarka u saaran inuu ka dhaco dagaal sokeeye
Kn: Hogaamiyaha mucaaradka Kenya, Raila Odinga ayaa shaaciyay inuu yahay madaxweynaha xaqa ah ee dalka Kenya asagoo ku dhawaaqay in 12 bisha Disember ay dhici doonta xafladda dhaarinta iyo caleemosaarkiisa, xili isla maanta ay magaalada Nairobi ka socotay xafladda caleemosaarka Uhuru Kenyatta.
Odinga wuxuu ku nuux-nuuxsaday inuu asagu yahay madaxweynaha dalka Kenya maadaama sida uu sheegay uu ku guulaystay doorashadii Kenya ka dhacday sideeddii Octobar, taasi oo uu sheegay in Uhuru uu si sharci daro ah ugu shubtay. Kumannaan taageerayaashiisa ah asagoo maanta kula hadlaya fagaaraha Jacaranda ee magaalada Nairobi ayuu sheegay inuu yahay madaxweynaha shacabka, sida uu dastuurku dhigayana uu yahay madaxweynaha dhabta ah ee Kenya. Mar uu ka hadlayay sida ay uga go’antahay dooddiisa ah inuu yahay madaxweynaha dalka ayuu yiri “ma ihi fulay, madaxweynenimada waxaa la ii dhaarin doonaa maalinta qaranka, waxaanan ahay madaxweynaha xaqa ah”.
Odinga oo ah nin macangag, maro ku dhag ah ayaa sheegashadiisani waxay ku soo aadaysaa xili isla maanta ay ka socotay garoonka weyn ee ciyaaraha ee magaalada Nairobi xafladda lagu caleemosaarayay madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta oo mar kale ku guulaystay doorashadii ku celiska ahayd.
Odinga iyo taageerayaashiisa ayay markii danbe laamaha amaanku kala cayriyeen ayagoo u adeegsaday suntan dadka kaga ilmaysiisa. Xiisadda ayaa cirka ku shareeran, waxaana aad u sii fogaanaya cuqdadda iyo colaadda sii kala kaynaysa qabaa’iillada hogaamiyaha mucaaradda iyo kuwa madaxweynaha oo labadooduba ah qowmiyahada ugu tirada badan dalkaasi Kenya.
Dadka siyaasaddaha ismaandhaafka odorosa ayaa saadaalinaya inay Kenya qarka u saarantahay inuu ka dhaco dagaal sokeeye, kaasi oo markani ay adkaan doonto in loo xakameeyo sidii kii doorashadii 2013kii.